အမျိုးသမီး တွေအနေနဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဒီဇင်ဘာ 11, 2020 .3mins read
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရာသီရက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ရက်မှတ်ထားရုံနဲ့ သားဥကြွေတဲ့ရက်တို့၊ နောက်တစ်ခါ ရာသီပြန်လာမယ့်ရက်တို့၊ ကိုယ်ဝန်ပတ်တို့ကို တွက်ချက်လို့ ရနေပြီလေ။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဒီဇင်ဘာ 8, 2020 .2mins read
ဆောင်းရာသီ ဆောင်းတွင်း အသားပပ် အသားခြောက် အရေပြား အသားအရေ သဘာဝအဆီ အစိုဓာတ် ရေဓာတ် ကိုဗစ် ကျန်းမာရေး အဝတ်အစား လက်ဆေး ဆပ်ပြာ တံတွေး နှုတ်ခမ်း
အရေပြားကျန်းမာရေး, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အလှအပ နိုဝင်ဘာ 30, 2020 .2mins read
Pepper Spray နဲ့ ဖြန်းခံထိတဲ့အခါ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 5, 2021 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 5, 2021 . 1 min read